Rudramati 2700 days ago
KaliKoPoi 2698 days ago
Visitor from US is reading मेरो विरानो नेपाल
Visitor is reading A Day in the Life ofaKathmandu Schoolbo
Visitor from US is reading Prachanda to be hanged
Visitor from DE is reading अष्ट्रेलिया सरकारको मन्त्रिस्तरीय सल्लाहकारमा नेपाली
Visitor is reading unlock code for lumia 900
Visitor from DE is reading नानीका बा उर्फ पुष्पकमल दाहालको नयाँ स्टकोट :)
Visitor from US is reading Transfer admission to US Universities
[VIEWED 3838 TIMES]
Posted on 01-21-14 4:33 PM Reply [Subscribe]
Posted on 01-21-14 4:34 PM [Snapshot: 1] Reply [Subscribe]
हवाई जहाजले केहिबेर निकै उफारो । मनमा अनेक थरि डर त्राशले घर गरे । आफ्नो सपनको शुरुआतमै................................ लामो सास फेर्नु र वरपर सबैलाई हेर्नु बाहेक केहि उपाए थिएन। कोहि मस्त निदाएका थिए त कोहि म मजस्तै छटपटायेका थिए । एकदुई घण्टा को सास्ती र छट्पट पछी जहाज फुत्त बाहिर उज्यालोमा निस्कियो । मानौ कुनै ठुलो अन्धायारो चेपबाट बल जफ्ती बाहिर निस्किएको होस् । सरिर अलि हल्का भयो। बाहिर हेरें । जता ततै पानी नै पानी थियो । अचम्म लाग्यो । नेपालमा बसेका मान्छे ले यति धेरै पानी एकै ठाउँमा देखेका हुँदैनन् । मनमा झट्ट आयो ”समुन्द्र होला”।
सबै यात्रुहरु पूर्ण आराम गरे म आराम गर्न सकिन । मनमा अनेक चाहिने नचाहिने कुराहरु खेली रहे । गाउँबाट सहर आउन डराउने म आज पहिलो पटक आफ्नो गाउँ देशबाट यति टाढा, संसारकै पल्लो कुना मा जाँदै छु । मेरो र परिवार को एकमुस्ट सपना बोकेर । म घुम्न जान लागेको अन्तर्ररास्ट्रिय यात्री पनि त थिइन आराम संग निधाउनालाई । बिरानो ठाउँ जांहा एक दुइ जना साथी बाहेक कसैलाई चिनेको छैन । आफ्नो देश भेश भूसा संस्कृती भन्दा अती फरक जहाँ आफ्नो मान्छे जसले आफु लाई मायाँ गरोस सुख दुखमा साथ देओस कोहिछैन ।
यस्तै मनका आस्थिर गन्थन खेलाउंदा खेलाउंदै जहाजले ओरालो लागेको भान भयो । अब केहि बेरमा कतारको दोहा बिमान स्थलमा बिमान उत्रिन्छ भन्ने उदघोषण भयो । रात पनि परि सकेको थियो । चारै तिर बत्तिहरुले सजिएको दोहा मानौ एउटा चित्रकारले बनाएको पुतली जस्तै चंकी रहेको थियो । अझ छेउमा रहेको समुन्द्र र समुन्द्रमा सहरको बत्ति ले परेको उज्जालोले त मन तेसै तानेर लान्थ्यो । ”यती राम्रो दृश्य जीवनमा पहिलो पटक देखेको थिंए मैल”
दोहाको छोटो बसाई पछी हामीलाइ आर्को जहाजमा उडाए । कति पुरानै यात्रु त कतिपय नंया यात्रुले खचा खच भरिएको जहाज लन्डनतर्फ उड्यो । यो यात्राको सबै भन्दा लामो उडाई थियो । तर बिचमा पन्द्र मिनेट जति पेरिसमा रोकिएर लन्डन तिर लागियो । पेरिस पनि देख्न पाइयो । धेरै खुसि लाग्यो । तर पेरिसको रमणीयता त्यो साँझको बेलामा बयान गर्ने आँट गर्न सकिन । मसंग त्यति सब्द हरु नै थिएनन । लन्डनको झन् कुरै नगर्दा बेश होला । जुन देसका मानिसहरुले धेरै सताब्दी पहिलानै संसार खाएका थिए । लगभग संसार भरीनै आफ्नो प्रभुत्तो जमाएका थिए तेस्ता मानिस बस्ने सहरको बयान गर्न म के सक्छुर । मलाई लागेको अर्को अचम्म के थियो भने समय । जति अगाडी बढ्दै गएपनि समय तेतिनै बस्थ्यो । लन्डन अमेरिका यात्रा सबै भन्दा थकाई लाग्ने भयो । मैले सोचे भन्दा धेरै फरक खालको सुबिधा थियो । मैले सोचे को थिए कि अमेरिकाका जहाज हरु धेरै सुबिधा जनक होलान मिठो खाना खुवाउलान तर तेस्तो भएन । सरिर पनि अलि थाकी सकेको थियो । खाना पनि खानै नसक्ने खल्लो मात्र थियो । मिठो दाल भात तरकारी को त्रिस्ना लाग्यो । फेरी मागेर पाउने पनि होइन, चुप्प लगेर सिटमा लम्पसार पर्नु बाहेक कुनै उपाए थिएन । मनले चाहेर पनि केही गर्न नसके पछि सिट मा लम्पसार पर्नु र यात्रा को आन्तिम गन्तब्य स्थानको प्रतिक्छा गर्नु मात्र फाइदा थियो ।
छ घण्टा लामो अटपट लाग्दो नरमाइलो यात्रा पछी म अमेरिका आइपुगें । मेरो आन्तिम थलो । न्युयोर्क सहर । मेरो सपनाको मेरो परिवार को सपनाको तर साँची भन्दा मेरो आबस्यकताको शहर । ठुलो र बिल्कुलै नयाँ शहर । शरिरमा धेरै हलचल मचिएको थियो । नयाँ ठाउंको र नयाँ जिन्दगीको । जिन्दगी मा कतिवटा नयाँ जिन्दगी बाच्ने मैले । कस्तो अचम्म! म एउटा गरिब देश मा जन्मेको गरिब मान्छे हुनको अभिसाप बोकिरहेको छु । हाम्रा दैनिक आबस्यकताले हामीलाई हरेक केही बर्समा एउटा नयाँ जिन्दगी थपी दिन्छन । कस्तो बिडम्बना । म पनि त्यसै भित्रको एउटा मान्छे । मनले नचाहेर पनि बाध्य भएर गर्नु पर्ने रहेछ ।
एअरपोर्ट मा नै साथीहरु लिन आएका रहेछन । सामान हरु मोटर मा खाँजेर न्युयोर्क सहर तर्फ लागियो । मेरो अब को नयाँ बासस्थान । ठुला ठुला गगन चुम्बी घर हरुको शहर । मैले नेपाल र मेरो गाउँसंग तुलना गर्ने कोसिस गरे यो शहर लाई तर कुनी तरिकाले पनि नजिक पुग्न सकिन ।
संसारकै सबैभन्दा अगला घरभएको शहर यो । बिकसित देश को अती बिकसित शहर, नेपालसंग तुलना गर्न खोज्नु या कोसिस मात्र गर्नु पनि बेकार नै हुन्छ । मलाई एसको तेती ठुलो मतलब पनि थिएन। म खाली पैसा कमायेर आफ्ना दैनिक आबस्यकता पुरागरने मान्छे । केही पैसा कमायेर नेपाल फर्कने मान्छे । मलाई यहाँको बिकाश संस्कृती लगाई खुवाई बोलीचाली मेलमिलाप आदि संग तेती चासो पनि थिएन । यहाँ जेसुकई होस मलाई मतलब छैन ।
एस्तैमा साथीले घर आइपुग्यो झरौं भनेपछि म जस्कियें । मैले बाहिर नियालें । ठुलो शहरको बिचमा एउटा आगलो र चाक्लो भवन जसमा मानु एउटा सहर्नै अटाउछ । देखेरै आचाम्म लाग्यो । सामान बोकेर माथि तीर लम्कियो । भवन को सुरक्छा सिस्टम पनि अचम्म को रहेछ । पासवर्ड पञ्च गरेर ढोका खोल्नु पर्ने । फेरी एलेभेटर बाट माथी नौ तला सम्म पुग्नु पर्ने रहेछ । मेरो बस्ने ब्यबस्था लिविंग रूम को एउटा कुनामा भयो । लिविंग रुममा अरु चार जना साथी पनि छन् रे । तर सबै जना नेपाली भन्दा खुसी भएँ म । भित्र एउटा बेडरूम मा भने दुई नेपाली केटी बस्छन रे । यो डेरा तिनिहरुको नाममा छ रे ।
मैले मेरो साथी बाहेक कसैलाई पनि देखिन किनकि सबैजना काममा । कति संगै बस्ने साथीलाई त कति हप्ता सम्म पनि देखिन । जागिरको कुरा चल्यो । आएको दुई दिनमै काममा लागे म । छिटै कम पाएकोले म भाग्येमानी ठहरियें । कतिले त महिना दिनसम्म पनि कामनपाउने रहेछन । काममा जान आउन बिस्तारै सिंके । दुईओटा ट्रेन चढेर दैनिक जानु हप्ताको छ दिन १२ घण्टा काम गर्नु बेलुका फर्किनु मेरो अब रेगुलर कार्य तालिका भयो । थाहा छैन कति लामो कार्यतालिका हो । हप्तामा बिदाको दिन भात पकाउनु, कपडा धुनु आफ्नु सुत्ने बिस्तार ओरिपरी सफागर्नु आदि काम पर्थे । सुत्ने बिस्तारा नै मेरो कोठामा हक जनाउने एउटा चिनो थियो । त्यो बिस्ताराले म त्यस घरमा बस्छु भन्ने जनाउथ्यो । अरु मेरा केहि समान थिएनन् ।
फेरी जिबनको पुरानै कुरा दोहोरिन थाल्यो । केहि दिनको झिनो खुसियाली रमाइलो पछि जिबनमा फेरी वाक्क दिक्क लाग्ने दिन आए । फेरी घर परिवार सम्झेर टोलाउने दिन आउन थाले । अब त झन् एती टाढा, हजारौ कोष टाढा । प्रेयसी र छोरा छोरी बाट हुने टाढा को फेरी बेग्लै किसिमको पिडा हुने रहेछ । दिनमा १२ घण्टा बाहेक तेस्तो पल आएन जतिबेला मैले तिनीहरुलाई बिर्से होला । पुराना गाउँ बाट टाढा हुँदा का र आफन्त बाट छुटिदाका दिन भन्दा पनि यी अझै कठोर र जीवन कै उपलब्धि मा प्रस्न चिन्ह लगाउने खालका भए । हरेक दिन केहि पल हरेस खान्थे र सोच्थे म यो सब्छोडेर देश फर्किन्छु! किन र केकालागी गर्दैछु ? आफ्ना माया गर्ने मान्छे बाट टाढा बसेर? हरेक बिकसित देसका मान्छे जस्तै हामी किन आफ्नो देशमा, आफ्नै परिवारका नजिक आफै जन्मेको ठाउँमा बसेर जिबन बिताउन नसक्ने ? किन हामी मात्र आफ्ना माया गर्ने भन्दा टाढा यो बिरानो मुलुक मा बसेर कस्ट र पिडा सहेर दिन बिताउनु पर्ने ? यस्तै अनगिन्ति उत्तर नभएका प्रस्नहरु मनमा उठाउदै दिन चर्या काट्दै गएँ । स्वास्नीसंग चारपाँच बर्षको मिठो मिलन पछि एका एक अनिश्चित कालको लागि बिछोड हुँदा धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ । कुनै निश्चित समय भएपनि कम्मर कसेर कुर्नु हुन्थियो । म पनि मानिस नै हुँ । मलाई पनि पिडा हुन्छ । मलाई पनि काम बाट घर फर्किंदा आफ्ना छोरा छोरीले बाबा भन्दै काखामा बसेको मन पर्थो । स्वास्नीले मुसुक्क मुस्कुराउदै भोकलागेको छ ? भन्ने प्रस्न विभिन्न अर्थ मिसाएर सुधेको मन पर्थो । एस्तै मेरा बूढा आमा बुवाले घर भित्र बाहिर गर्दै नाती नातिना खेलाएको हेरन मन पर्थो । यी सबै जिबनमा जम्मा एकपटक आउने अविस्मरणीय छेन हरु हुन । फेरी फर्केर आउदैनन । येस्ता पलहरुलाई भुलेर बिदेशमा पैसा कमाउन बस्नु पर्ने पिडा बोक्ने कम् मात्र नेपाली होलान । यो पिडा भन्दा अर्को कुन ठुलो पिडा हुन्छ र?
हरेक दिन नेपालमा फोन गर्नु । परिवार संग कुराकानी गर्नु । बिस्तारामा लम्पसार पर्नु भन्दा अगाडिका दैनिक कार्य जस्तै भए । फेरी फोन लाग्न गाह्रो । फोन नलागेको दिनमा निदाउन गाह्रो । फोन मा कुरागर्ने बिषय हरेकदिन एउतै । खाली केटा केटि को हालखबर के छ ?, तिम्रो हालखबर के छ , आमा बुवाको हालखबर, गाउँ को हालखबर आदी इत्तादी । एकान्त पर्दा लोग्ने स्वास्नेका गोप्य कुराले ठाउँ पाऊनु र तेस्ता कुराको रश बेग्लै थियो । गीतमा धेरै चासो नराख्ने मेरी स्वास्नी को मनपर्ने गीत ”भिज्यो सिरानी रातमा तिम्रो यादमा.....” भन्ने गीत भयो । विचार गंरे पिडामा मान्छे ले भगवान को साहारा त लिन्छ नै पिडा अभिब्यक्त गर्न गीत को पनि साहारा लिँदो रहेछ! नेपाल फर्कने सम्भावना पनि छैन किनकि पैसाले पनि पुगेको छैन । आर्कोकुरा कागज पनि भएको छैन । सबै कामनसकी फर्कने कुरा पनि आएन । चुपचाप पिडा सहेर कागज कुर्नु र पैसा कमाउदै जानुबाहेक अर्को उपाए पनि थिएन । अमेरिका बाट पैसा कमाएर नेपाल फर्किन्छु भन्ने पनि हरेक नेपालीको मुखमा छ तर पुराहुन सम्भब छैन । फर्किने सकेपनि फेरी केटा केटी को भविस्यको कुरा आउँछ । नेपाल मा केटाकेटी पढाएर के गर्ने आफूजस्तै बेरोजगार बनाउनु बाहेक के छ र? फेरी पढेर पनि कहिले सकिनेहो? सधै नेपाल बन्द हड्ताल बाहेक के नै छ र । आदी ईतादी कुरा मात्र मनमा खेल्न थाले । देश फर्कने परिवार संग बस्ने संभवाना देख्न सकिन । आमा बुवाको विचार फरक छ । छोरा देश फर्कोस । देश मै बसोस । तर प्रसस्त आर्थिक उन्नति बिना त्यो पनि सम्भव थिएन । कतै बाट पनि हामीजस्ता गरिब को जिन्दगीमा सुख थिएन । छोराको सर सन्तान नै देश बाट पलाएन हुने भयो भन्ने थाहा हुँदा हुदै पनि आमा बुवाले छुरा छोरी ल्याउने स्वीकृति दिनु भो । किनकी म अमेरिकामा एक्लै भएकोले । छोरा पछी नाती नातिना लाई बिदा गर्ने पिडा पनि सहनु पर्ने भो आमा बुवाले । उनीहरुलाई यो पिडा धेरै कठिन हुन्छ भन्ने मलाई थाहा थियो । छोरा ले केहि पाउँछ । नाती नातिनाको भबिस्य उज्वल हुन्छ भनेर यो निर्णय पनि गर्नु भयो ।
अमेरिका मा हरेक चिज मा लाईन छ हामी आतिएर के गर्ने । कागज आउन पनि धेरै समय लाग्यो । सोचे को भन्दा धेरै बढी । पर्खेर बस्दा बस्दा आँखा पनि धमिला भैसके । यो मनलाई पत्यार लाग्न पनि छोड्न थाल्यो । बिछोड पनि अतिनै कठोर हुदै जान थाल्यो । न म नेपाल जान नै पाउछु न परिवार ल्याउन पाउँछु? न त पैसाले नै पुग्छ र सबै छोडेर नेपाल जान सक्छु ? बसाई झन् कठोर बन्दै गयो । धेरै दशैं तिहार चाडपर्व काम गरेरै बिते । चाड पर्वमा फोन गर्नु आफुले मन दुखाउनु परिवारको रुन्चे आवाज सुन्नु मात्र कति बर्ष सम्म ? यो जिन्दगी को परिभाषा पनि बेग्लै हुनथाल्यो । कति आफन्तका बिवाह, ब्रतबन्ध, नुवारण जस्ता खुसीका अबसरमा सम्लंग्न हुनसकिन । कसैको दुख मा सहयोग गर्न सकिन । कति आफ्नालाई भेट्ने रहर हुदा हुदै संसारै छोडेर गए । येस्ता हजारौं पीडाहरु बोकेर पनि मान्छे ले पैसाको आश छोड्न सक्दो रहेनछ। म जस्ता मान्छे को जुनी भन्दा अमेरिकामा जनावरको जुनी राम्रो लाग्न थाल्यो मलाई । तिनलाई जन्म थलो र आफन्त बाट छुटेर त बस्न पर्दैन । यस्तै पर्खाइका ती पीडादायक पल पलहरु काट्दै जिबन काट्न बाध्य छु पर्खनु बाहेक कुनै अर्को उपाए मनमा आउन सकेन ।
सोमबार मन नलाग्दा नलाग्दै पनि मेल बक्स खोलें । यु. येस. इमिग्रेसंको चिठी देख्दा जस्किये । अचम्म को कुरा भयो । क्रमस....
Posted on 01-23-14 1:58 PM [Snapshot: 162] Reply [Subscribe]